Garsooraha Premier League Michael Oliver ayaa qirtay inuu qalad sameeyay markii uusan u dirin goolhayaha Everton Jordan Pickford inuu dhaawac halis ah soo gaaro daafaca Liverpool Virgil van Dijk.
Garsoore Oliver ayaa lagu dhaleeceeyay go’aankiisa ka dib qaladkii uu Picford ku galay Van Dijk kulankii Merseyside Derby bishii October 17, taas oo Van Dijk u keentay dhaawac halis ah oo jilibka ah una baahan qalliin.
Inkasta oo khaladka Picford uu ka dhacay xerada ganaaxa Everton, hadana wax rigoore ah lama abaalmarin maadaama VAR muujisay in Van Dijk uu offside ku jiray, laakiin Oliver ayaa haatan qirtay in ay ahayd in casaan la siiyo goolhayaha reer England.
Michael Oliver ayaa u sheegay Daily Mail: “Fikirkeygii ugu horeeyey wuxuu ahaa,‘ rigoorana ma noqon karo maxaa yeelay waa Offside sidaa darteed waa inaan marka hore hubino Offside ’. Waxaan u sheegay xubnaha VAR “hadii aysan Offside aheyn, waxaan abaalmarin doonaa rigoore”. Waxaan daawaday dhowr jeer. Waxaan si daacad ah u aaminsanahay in Pickford uusan wax qalad ah sameynin oo aan ka aheyn inuu kala bixinayo isagoon si qaldan u baarin naftiisa taasoo keentay dhaawac
Dhamaanteen, oo aan kujiro, kama aanan fikirin qaladka dhaawaca keenay, laakiin waxay ahayd inaan fiirino qaladka. Waxaan dhigi lahaa Offside ka dibna waxaan siin karaa Pickford kaarka cas. Waxaa layaab igu noqotay, qofna garoonka dhexdiisa ma weydiisan kaarka cas. Midkoodna ciyaartoyda uma doodin kaarka cas ee Pickford.
“Waxaan ku mashquulsaneyn inaan ogaanno inay Offside tahay, laakiin waa inaan eegno khaladka dhaawaca keenay. Waxay ahayd inaan Offside dhigo oo aan ciqaabo Jordan Pickford. “
axadle 5749 posts
Shaxda ugu adag ee Frank Lampard ee Chelsea